ကုမ္ပဏီသမိုင်း | GMO's Global Brand "Z.com"
အစပိုင်းမှာ Multi-media ကုမ္ပဏီ၊ Voice Media အဖြစ်တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ GMO Internet ဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
Voice Media ကို "interQ" ဟု ကုမ္ပဏီနာမည်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
Memberဝင်စရာမလိုသည့် ကမ္ဘာတွင် ပထမဆုံးသော အင်တာနက်accessလုပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသစ်ကို "interQ ORIGINAL" ကနေ စတင်မိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
InterQ (ယခုလက်ရှိ GMO Internet) သည် အာရှတွင် ICANNမှ အသိအမှတ်ပြု ဒိုမိန်းနာမည်မှတ်ပုံတင်ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းregistrar ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော independent Internet venture ဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီစာရင်းဝင် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
discount domain (ယခုလက်ရှိ Onamae.com) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို စတင်မိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်ပြီး 364ရက်အကြာတွင် Group ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် "Magclick စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ (ယခုလက်ရှိGMO AD Partners Inc. )" သည် စတော့စျေးကွက်သမိုင်းရဲ့ Nasdaq Japan (ယခုလက်ရှိ JASDAQ)မှာ အချိန်တိုတွင်း စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
"Global Media Online.စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ" အဖြစ် ကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
တိုကျိုစတော့အိပ်ချိန်း၏ ဒုတိယsectionအထိ အဆင့်တိုးမြင့်လာခဲ့ပါသည်။
အုပ်စုကုမ္ပဏီ "GMO Payment Gatewayစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ" မှာ တိုကျိုစတော့အိပ်ချိန်း Mothers စျေးကွက်စာရင်းဝင် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ GMO Internet Group၏ တတိယမြောက် အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့ပါသည်။
Global Media Onlineမှာ တိုကျိုစတော့အိပ်ချိန်း၏ ပထမဆုံးsectionဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ "GMO Internet Group" အဖြစ် ကုမ္ပဏီအမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
အုပ်စုကုမ္ပဏီ "GMO Hosting & Securityစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ" (ယခုလက်ရှိ GMO Cloudစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ )မှာ တိုကျိုစတော့အိပ်ချိန်း Mothers Market ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ GMO Internet Group၏ လေးခုမြောက် အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့ပါသည်။
GMO Internet online securities ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ (ယခုလက်ရှိ Click online securities ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ)ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ online securities အရောင်းအဝယ်ဝန်ဆောင်မှုများကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်ဖက်စပ် ပျမ်းမျှရှယ်ယာ500ကျော်ကို ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
Yahoo! JAPAN နှင့် အကျိုးတူ စီးပွားဖက်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
အုပ်စုကုမ္ပဏီ "GMO Payment Gatewayစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ" သည် တိုကျိုစတော့အိပ်ချိန်း၏ ပထမဆုံးsectionအဖြစ် အဆင့်တိုးမြင့်လာခဲ့ပါသည်။ GMO Internet Groupတွင် ပထမဆုံးsection ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
အုပ်စုကုမ္ပဏီ "စတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီ paperboy & co (ယခုလက်ရှိ GMO Pepaboကုမ္ပဏီ)" သည် Nasdaq Japan Online security exchange (ယခုလက်ရှိ JASDAQ)စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။ GMO Internet Group၏ ငါးခုမြောက် အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဒိုမိန်းနာမည်မှတ်ပုံတင်ဝန်ဆောင်မှု "onamae.com" ၏ 10နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
တကမ္ဘာလုံးသို့social applications များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးမည့် "App-Yarouze by GMO" ပရောဂျက်ကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။
Coupon partenship ဝယ်ယူတဲ့ဆိုဒ် "Kumapon by GMO" ကို စတင်သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်အတူ brand Imageတစ်ခုရရှိစေရန် corporate logoသစ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဒိုမိန်းနာမည်မှတ်ပုံတင်ဝန်ဆောင်မှု "onamae.com" မှာ ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူအများဆုံး ကမ္ဘာမှာ နံပါတ်တစ်နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ အဓိကကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် GMO RunSystem Corporation.မှတဆင့် ဒိုမိန်းနာမည်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
JASDAQစတော့ရှယ်ယာစာရင်းတွင်ပါဝင်လာသည့် "FX PRIME Corporation (ယခုလက်ရှိ FX PRIME byGMO)" မှာ GMO Internet Group၏ ခြောက်ခုမြောက် အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
Microsoft Japanနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကမ္ဘာမှာ ပထမဆုံး Windows®အတွက် Application cloudပုံစံ development environment "onamae.com desktop cloud" ပြုလုပ်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
Social game သီးသန့်သုံး cloud service "GMO AppsCloud" မှ အသုံးပြုနိုင်သည့် ဂိမ်းပေါင်း 1,000ကျော် သမိုင်းမှတ်တိုင်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
GMO Internet၏ "GMO AppsCloud" မှ GameBusiness.jp App Cloud Awards 2013. ဆုကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
GMO Internetနှင့် GMO RUNSYSTEM တွင် အင်တာနက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများသုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ဗီယမ်နမ်နိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည့် ဟန်နွိုင်းမြို့တွင် "GMO Vietnam Lab Center" ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
စမတ်ဖုန်းဖြင့် ဆော့သည့် ဘောလုံးဂိမ်းသမားများအတွက် "Smart Soccer by GMO" Android applicationကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
IPv6, multiple IP လိပ်စာများနှင့် local network support. ပေးနိုင်သည့် VPS brandသစ် "ConoHa byGMO" ကို စတင်မိတ်ဆက်အသုံးပြုစေခဲ့ပါသည်။
Remote desktop service၊ "onamae.com desktop cloud" မှာ "Microsoft Partner of the Year Awards 2013" ၏ "Hosting Competency prize." ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် တိုကျိုမြို့နယ် လူမှုဖူလုံရေးဌာနမှ 12ပိုင်း26နေ့ရက်စွဲဖြင့် နောင်လာမည့်လူငယ်များပြုစုပျိုးထောင်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ လူငယ်များ တိုးတက်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီး၊ အသိအမှတ်ပြု အမှတ်အသား "Kurumin" ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
GMO Internet Group၊ GMO Venture Partnersနှင့် Bakumatsuကုမ္ပဏီသုံးခု ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် "GMO Venture Tsushin Startup Support Co. Ltd." ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
မိုဘိုင်းဂိမ်းသမားများအတွက် cloud businessများ တိုးချဲ့စေရန်အတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည့် ဆိုးလ်မြို့တွင် "GMO Data Center Korea,Inc." ကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
"onamae.com" တွင် နိုင်ငံတွင်းရှိ နယ်မြေဒေသအမည်ပေးထားသည့်ဒိုမိန်းသစ် ".nagoya" ကို အသုံးပြုနိုင်လာခဲ့ပါသည်။
"onamae.com" တွင် တိုကျိုကို ကိုယ်စားပြုသည့် နယ်မြေဒေသအမည်ပေးထားသည့်ဒိုမိန်းသစ် ".tokyo" ကို အသုံးပြုနိုင်လာခဲ့ပါသည်။
"GMO AppsCloud" မှ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်းအရာများကို အသစ်တဖန်ပြုလုပ်ထားသည့် OpenStack baseခံ cloud service သစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
အုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် "GMO research" ကုမ္ပဏီမှာ တိုကျိုစတော့အိပ်ချိန်း Mothers Market စာရင်းဝင် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ GMO Internet Group၏ ခုနှစ်ခုမြောက် အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
အုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် "GMO Cloud" ကုမ္ပဏီမှာ တိုကျိုစတော့အိပ်ချိန်း ပထမsectionအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ GMO Internet Group၏ သုံးခုမြောက် ပထမsectionစာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
အုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် "GMO TECH" ကုမ္ပဏီမှာ တိုကျိုစတော့အိပ်ချိန်း Mothers Market စာရင်းဝင် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ GMO Internet Group၏ ရှစ်ခုမြောက် အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
GMO Internet Group၏ Global Brandဖြစ်သည့် “Z.com”ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်လာခဲ့ပါသည်။
"GMO CLICK Holdingsအစုရှယ်ယာကုမ္ပဏီ" Holdings နံပါတ် (7177) ကို FX Prime by GMOအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး၊ JASDAQ securities စျေးကွက်စာရင်းဝင် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
"Z.com Dmain","Z.com Cloud","Z.com SSL" စတင်အသုံးပြုနိုင်လာခဲ့ပါသည်။
ေျပာင္းလဲထားေသာ Z.com ၏ Logo ဒီဇိုင္း